Ferdinand oo ka aragti dhiibtay go’aankii ay kaga dhaqaaqeen xiddigaha Sánchez iyo Lukaku kooxda Man United
(Manchester) 02 Sebt 2019. Daafacii hore kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa ka aragti dhiibtay bixitaanka xiddigaha Alexis Sánchez iyo Romelu Lukaku.
Rio Ferdinand ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay bixitaanka xiddigaha Sanchez iyo Lukaku, kuwaasoo ka dhaqaaqay garoonka Old Trafford suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Romelu Lukaku ayaa ugu dhaqaaqay kooxda Inter Milan heshiis qaali ah ee ku kacay qiimo dhan 73 milyan oo ginni, kahor inta uusan Sánchez qaab amaah ah ee ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan ugu dhaqaaqin garoonka San Siro.
Wargeyska “Daily Express” ee dalka England ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay halyeeyga kubadda cagta ee dalka England Rio Ferdinand waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa uu sameeyay tababare Ole Gunnar Solskjær, sababtoo ah waxaan bilaabay inaan arko waxa uu ka doonayo shaxda kooxda Man United, durba wuxuu bilaabay inuu gaaro waxa uu rabo”.
“Waxaan xasuustaa wareysi aan la yeeshay dhamaadka xilli ciyaareedkii hore, wuxuu ii sheegay inuu doonayo in kooxdan ay noqoto kooxda ugu fiican, si adagna uu u shaqeeyo, isla markaana uu doonayo inuu halkan sii joogo”.
“Haddii ciyaartooyda aysan fiicneyn, waa inay baxaan, waana ku faraxsanahay taas. Muddo aad u dheer Manchester United waxaa jiray ciyaartoy wax walba u qabtay kooxda intii ay ku sugnaayeen garoonka Old Trafford”.